Man United Oo Diyaarinaysa Dalab 50 Milyan Oo Euro Ah Xagaagan Si Ay U Hesho Xiddiga Borussia Dortmund
Home Horyaalka Germalka Man United oo diyaarinaysa dalab 50 milyan oo euro ah xagaagan si...
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay isku diyaarineyso dalab 50 milyan ginni xagaaga ah oo ay ku dooneyso garabka kooxda Borussia Dortmund Jadon Sancho.
Sancho, oo 20 jir ah, ayaa ku riyaaqay horumar weyn oo cajiib ah oo uu ka sameeyay Dortmund ka dib markii uu horumar ka sameeyay Bundesliga isagoo ka soo baxay akadeemiga kooxda Manchester City.
Tan iyo markii uu yimid Jarmalka sanadka 2017 oo uu bilaabay bilowgiisii ​​ugu horeeyay sanadka 2018, Sancho wuxuu kasoo muuqday 125 kulan tartamada oo dhan.
Shaki la’aan, 20 jirkaan weerarka ka ciyaara ayaa xilli ciyaareedkiisii ​​ugu fiicnaa yimid xilli ciyaareedkii hore ka dib markii uu dhaliyay 40 gool oo toos ah 44 kulan oo uu ciyaaray, tartamada oo dhan.
qaab ciyaareedka xidiga reer England ayaa ahaa mid wanaagsan taasoo keentay in la soo jeediyo inuu u muuqday inuu bartilmaameed dhab ah u yahay kooxda Premier League ka dhisan ee Manchester United.
Previous articleMikel Arteta oo ka warbixiyay dhaawaca soo gaaray Thomas Partey
Next articleLiiska Xiddigaha Liverpool ee Kulanka Leicester City Fabinho oo seegi doona kulankan